Loolankii Jabuuti iyo Kenya ee golaha ammaanka QM oo lagu wado inuu maanta soo gaba-gaboobo - Awdinle Online
Loolankii Jabuuti iyo Kenya ee golaha ammaanka QM oo lagu wado inuu maanta soo gaba-gaboobo
Golaha Guud ee Qaramada Midoobe ayaa Arbacada maanta ah dooran doona shan xubnood oo ka tirsan kuraasta aan joogtada aheyn ee Golaha Ammaanka Qaramada Midoobey.
Kuraasta lagu tartamayo ayaa muddo sanadeedkoodu yahay 2021-2022, waana mid wareeg ah oo ay ku tartamayaan dalalka qaaradaha Adduunka, sanad kasta ayaa loo tartamaa kuraasta aan joogtada aheyn ee Golaha ammaanka
Kenya iyo Jabuuti ayaa u tartamaya hal kursi, halka dalalka reer Galbeedka ay saddex dal ku tartamayaan labo kursi, sida Canada, Ireland iyo Norway.
Mexico iyo India ayaa ah labada dal ee aan tartan adag kala kulmi doonin dalal kale, maadaama keligood uga sharxan yihiin qaaradahooda.
Loolanka ugu weyn ee kursiga ayaa noqday mid ka dhex bilowday dalalka Kenya iyo Jabuuti oo olole ballaaran u galay sidii midba midka kale ugu guuleysan lahaa, iyadoo labadan dal intii ololaha ugu jiraan hadalo adag iska weydaarsadeen warbaahinta.
Kenya ayaa sanadkii 2019 heshay aqlabiyada xubnaha ka socda Midowga Afrka, waxaana ay rajo badan ka qabtaa inay hesho kursiga Golaha Ammaanka Qaramada Midoobey
Sidoo kale Jabuuti ayaa olole ka sameysay dalalka Islaamka iyo jaamacadda Carabta, si ay u hesho cododka dalalkaas, sidoo kale dalal badan ayay taageero ka raadisay.
Labada dal Jabuuti iyo Kenya ayaa midkii ku guuleysta kursiga Golaha Ammaanka waxay bedeli doonaan dalka Koofur Afrika oo waqtiga ka sii dhamaanaya.
Tan iyo sanadkii 2007-dii Midowga Afrika ayaa hal kursi ee uu Golaha Ammaanka Qaramada Midoobey ku leeyahay waxaa loo adeegsadaa hab wareeg ah loogu tartansiiyo dalalka Afrika.
Previous articleDilkii foosha xumaa ee shalay ka dhacay Muqdisho oo Taliska Booliska Somaliya ka hadlay
Next articleFaah faahin laga helayo Qarxyo ka dhacay G/Shabeellaha Hoose